Ny Fehin-Tendany Ihany No Namonoana Azy : Manaloka Ny Fiarahamonina Kyrgyz Ny Famonoana Mpianatra iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2015 5:01 GMT
Nosokafàna ny fanadihadiana kanefa mbola tsy nahitàna valiny mihitsy. Zatovo lahy iray akaiky an'ilay Lohandohan'ny mpisorona ara-politika ao Azia afovoany no isan'ireo olona nahita azy velona farany. Ny kaonty Whatsapp an'i Duishebaeva, izay tsy nandeha kely avy eo nandeha ndray hatramin'izay nahafatesany izay, no tena iompanan'ny resaky ny mpanao gazety ao an-toerana, mpanao gazety izay mangataka indrindra ny fandraisan'ny fanjakana ny andraikiny. Nilaza ireo mpitsikera ny fampiharana ny lalàna fa ny kolikoly sy ny kiantrano an-trano no nanembatsembana iny raharaha iny.
Mety efa nihena ny fanarahan'ny olona iny raharaha iny, raha tsy ny kaonty WhatsApp an'i Duishebaeva no namerina izany indray. Araka ny voalazan'ny polisy, efa voafafa ireo hafatr'i Duishebaeva tao amin'ny WhatsApp tamin'ny fotoana nahitanà mpiasa iray mpandroaka fako avy ao kaominina ny findainy tamin'ny taona lasa, kilometatra maro lavitry ny nahitàna ny nofo mangatsikany. Nandeha hatrany ny kaontiny hatramin'ny volana May avy eo dia tsy hita tanteraka ary niverina hita indray — ahitàna hetsika — ny volana Febroary tamin'ity taona ity.